China VC အပတ်စဉ်-ဒေတာ ထောက်လှမ်း ရေး၊ အစားအစာ နည်းပညာနှင့် စမတ် ကားများ - Pandaily
China VC အပတ်စဉ်-ဒေတာ ထောက်လှမ်း ရေး၊ အစားအစာ နည်းပညာနှင့် စမတ် ကားများ
Feb 28, 2022, 19:21ညနေ 2022/02/28 23:44:24 Pandaily
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က “China Venture Capital News” တွင် စားနပ်ရိက္ခာ နည်းပညာ ကုမ္ပဏီ Moodles သည် Round A မတိုင်မီ ရန်ပုံငွေ များ ရရှိခဲ့ပြီး ဒေတာ ထောက်လှမ်းရေး ကုမ္ပဏီ Guandata သည် Round C တွင်ဒေါ်လာ ၄၄ သန်း ရရှိခဲ့သည်။
Food Technology Startup Moodls Bags Pre-A Round Financing
တရုတ် အစားအစာ နည်းပညာ ကုမ္ပဏီ Moodles သည် Pre-A ရန်ပုံငွေ ပြီးစီး ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ ဤ အလှည့် ကို Jiyuan Capital မှ ဦး ဆော င်ပြီး လက်ရှိ ရှယ်ယာရှင် များဖြစ်သော Fine Will Capital နှင့် Renshan Capital တို့ပါဝင်သည်။
၎င်းသည် ပြီးခဲ့သည့် ခြောက် လအတွင်း ကုမ္ပဏီမှ ပြီးစီး ခဲ့သော ဒုတိယအကြိမ် ငွေကြေး ဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာ လက Moodless သည် Fine Will Capital နှင့် Renshan Capital မှ အိန် ဂျယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ယွမ် ၁၀ သန်း (ဒေါ်လာ ၁. ၅၈ သန်း) နီးပါး ရရှိခဲ့သည်။
Moodles ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ တွင်စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ရိုးရာ အစားအစာ များ နှင့်အလွန် ဆင်တူ သည့် အဓိက အစားအစာ များ ကိုပေးသည်။
Tiger Global မှ ဒေါ်လာ ၄၄ သန်း ဖြင့် Guandata ဦးဆောင်
တရုတ် ဒေတာ ထောက်လှမ်းရေး ကုမ္ပဏီ Guandada သည် Tiger Global မှ ဦး ဆောင်သော C Round အတွက် ယွမ် သန်း ၂၈၀ (ဒေါ်လာ ၄၄ သန်း) ရရှိခဲ့သည်။ လက်ရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူ Sequoia Capital China Fund ၊ Linear Capital ၊ Unicorn Capital Partners နှင့် Xianghe Capital တို့သည် နောက်ဆုံး အဆင့် တွင်ပါ ၀ င် ခဲ့ကြသည်။
ယခုနှစ် အစောပိုင်းက ထောက်ခံ သူ လေး ဦး နှင့် China Growth Capital တို့သည် Guandata ‘s B + Round သို့ ယွမ်သန်း ၁၀၀ (ဒေါ်လာ ၁၅ သန်း) ထိုးသွင်းခဲ့သည်။
ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် ၎င်း ၏အချက်အလက် ထုတ်ကုန် များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရန်၊ ဖောက်သည် ဝန်ဆောင်မှု အထောက်အပံ့ တိုးတက် စေရန်နှင့် လုပ်ငန်း တိုးချဲ့ ရန်အတွက် ရန်ပုံငွေ များကိုအသုံးပြု ရန်စီစဉ်ထားသည်။
Guandada ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် Hangzhou တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ လက်လီ ရောင်းဝယ် မှု၊ စားသုံး သူ၊ ဘဏ္ finance ာရေး၊ အဆင့်မြင့် နည်းပညာနှင့် အင်တာနက် အပါအ ၀ င် စက်မှုလုပ်ငန်း ၁၀ ခု နီးပါး တွင် စက်မှုလုပ်ငန်း ကစားသမား ၄၀၀ ကျော်ကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန် ကုမ္ပဏီက ဆိုထားသည်။
Multiway Robotics A2 Round အတွက် ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှု ယွမ်သန်း ၁၀၀ ကျော်
China Intelligent Internal Technology Solution Provider Multiple Robots (Shenzhen) Co., Ltd. က A2 Round Funding တွင် & nbsp အတွက် ယွမ်သန်း ၁၀၀ (ဒေါ်လာ ၁၅. ၈ သန်း) ကျော် ရရှိ ခဲ့သည်ဟု ကြေငြာခဲ့သည်။ . အဓိက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူမှာ China Venture Capital Corporation (CCV) ဖြစ်ပြီး တစ်ခုတည်းသော ဘဏ္ adv ာရေး အကြံပေး သည် Leap Capital ဖြစ်သည်။ ရန်ပုံ ငွေများကို ထုတ်ကုန် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အဖွဲ့ တည်ဆောက်ခြင်း၊ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နှင့်အခြား ရည်ရွယ်ချက်များ အတွက်အသုံးပြု ရန်ရည်ရွယ်သည်။
Multiway Robotics သည် မူပိုင်ခွင့် နည်းပညာ ၂၅၀ ကျော်ကို လျှောက် ထားပြီး စီမံကိန်း ၃၀၀ ကျော်ကို အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် စက်မှုလုပ်ငန်း ၂၀ ကျော်မှ ဖောက်သည် ၂၀၀ ကျော် အတွက် အဖြေ များ ပေးသည်။
Multi-channel စက်ရုပ် အကြောင်း
Multiway Robotics ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံ ရှန်ကျန်း တွင် အခြေစိုက် သည်။ ဖောက်သည်များအား ပြည့်စုံသော အသိဥာဏ် ရှိသော ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းချက် များပေး ရန် ကုမ္ပဏီသည် အဆင့်မြင့် စက်ရုပ် များနှင့် AI ကိုအာရုံစိုက် ခဲ့သည်။
စမတ် ကား ကုမ္ပဏီ MINIEYE သည် D2 ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှု ပြီးဆုံး သည်
စမတ် ကား နည်းပညာ ကုမ္ပဏီ MINIEYE သည် ဒေါ်လာသန်း ရာနှင့်ချီ သော D2 ရန်ပုံငွေ ပြီးစီး ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူများတွင် China Development Bank Manufacturing Transformation Fund ၊ China Unicom CICC ၊ CICC Capital ၏ Changde Emerging Industrial Fund ၊ Chongqing Kexing Kechuang Equity Investment, OFC စသည်တို့ပါဝင်သည်။
ဤ အလှည့် အပြောင်း တွင် ရရှိသော ရန်ပုံ ငွေများကို အဓိကအားဖြင့် စမတ် မောင်းနှင်မှု ထုတ်ကုန်များ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထုတ်လုပ် ခြင်းတွင် ကုမ္ပဏီ၏ ဦး ဆောင်မှု အနေအထားကို ခိုင်မာ စေရန် နှင့်၎င်း၏ အဆင့်မြင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ မောင်းနှင်မှု သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အရှိန်မြှင့် ရန်အသုံးပြု လိမ့်မည်။
2014 ခုနှစ်တွင်စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, MINIEYE ယခုအချိန်အထိ ၎င်း၏ ကိုယ်ပိုင် L0-L2 အဆင့် မြင့် မောင်းနှင်မှု အကူအညီ စနစ် “iSafety”, L2 + နှင့် L2 + + အသိဉာဏ် မောင်းနှင်မှု စနစ်များ “iPilot” နှင့် စမတ် console ကို အာရုံခံ ခြင်းနှင့် အပြန်အလှန် ယူနစ် “iCabin” တီထွင် ထုတ်လုပ် နိုင်ခဲ့သည်။
ဖက်ရှင် အားကစား အမှတ်တံဆိပ် Starter သည် နောက်ဆုံး ရန်ပုံငွ ေဒေါ်လာ သန်း ၄၀ ရရှိ ခဲ့သည်
နိုင်ငံတကာ ဖက်ရှင် အားကစား အမှတ်တံဆိပ် Starter Round C ရန်ပုံငွေ ဒေါ်လာသန်း ၄၀ ရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါ ပြိုင်ပွဲကို QY Capital က ဦး ဆော င်ပြီး လက်ရှိ ရှယ်ယာရှင် များဖြစ်သော Sequoia China, Hyun Fashion နှင့် M31 Capital တို့ပါဝင်သည်။ Cygnus Equity သည် သီးသန့် ဘဏ္ adv ာရေး အကြံပေး အဖြစ်ဆောင်ရွက် သည်။
တရုတ်နိုင်ငံသို့ ၀ င်ရောက် ကတည်းက Starter သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ယွမ်သန်း ၁၀၀ နှင့် ၂၀၂၀ တွင် ဒေါ်လာသန်း ၃၀ တန်ဖိုးရှိ ရန်ပုံငွေ နှစ်ခု ရရှိခဲ့သည်။ Sequoia China, M31 Capital, Dazzle Fashion နှင့် Sky9 Capital စသည့် ကုမ္ပဏီ များက ကုမ္ပဏီကို ထောက်ပံ့သည်။
Starter သည် ၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ Connecticut တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး hip-hop နှင့် လမ်း ယဉ်ကျေးမှု အပြင် လူငယ် အားကစားသမား များ၏ တက်ကြွ မှုနှင့် တက်ကြွ မှုကို အာရုံစိုက်သည်။ ၁၉၉၉ တွင် Starter ကို တည်ထောင်သူ များမှ ရောင်းချ ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် Nike နှင့်၎င်း၏ ကုမ္ပဏီ များက ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ဝယ်ယူခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် Nike သည် Starter ကို အမှတ်တံဆိပ် စီမံခန့်ခွဲမှု ကုမ္ပဏီ Iconix Brand Group သို့ ရောင်းချခဲ့သည်။ 2017 ခုနှစ်တွင် Black Ant Group သည် Greater China ရှိ Starter ၏ သီးသန့် လုပ်ငန်း လိုင်စင် ရရှိရန် Iconix Brand Group ၏ တရုတ် လက်အောက်ခံ ကုမ္ပဏီနှင့် သဘောတူညီမှု ရရှိခဲ့သည်။ ဒါေပမယ့္လည္း ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေရာက္ မွသာ တရုတ္ ေစ်းကြက္မွာ Starter က ေရပန္းစား လာခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် Iconix Brand Group သည်၎င်း၏ အမှတ်တံဆိပ် Starter ၏လုပ်ငန်း များကို တရုတ် စျေးကွက် တွင် အမည်မသိ ၀ ယ် သူတစ် ဦး ထံ ရောင်းချ ခဲ့သည်ဟု ရုတ်တရက် ကြေငြာခဲ့သည်။